हामी निर्धक्क भई ठोकुवा गर्न सक्छन् डबल बाइक कि - मजा मनोरञ्जन को एक सबै धेरै पहिले हो। को cyclists एक दुई-wheeled परिवहन पर्याप्त विश्वास छैन व्यवस्थापन गर्दा सवार लागि दुई सिट संग साइकल, समस्या को एक सम्पूर्ण पाहुना solves विशेष गरी।
यसलाई डबल पाङ्ग्रा भनिन्छ रूपमा?
डबल बाइक लागि सही नाम - अग्रानुक्रम। यस्तो मोडेल साइकिल दुई वा बढी cyclists, फ्रेम अन्य पछि एक मा प्रबन्ध छन् जसको लागि हुन सक्छ।
हुनत यो आविष्कार38 सिट प्रदान गरिएको छ जो साइकिल, थियो भन्दा साधारण विकल्प, ठ्याक्कै डबल tandems मोडेल छन्। तथापि, अभ्यास एकदम गाह्रो र असहज यी बाइक प्रयोग गर्न।
साइकल डबल वयस्क लाभ को एक नम्बर अलग:
सबै को पहिलो, यस्तो मा एक वाहन त्यहाँ मांसपेशी बल एकै समयमा केही cyclists सक्रिय किनभने, एक प्रभावशाली गति, साइकिल को मोडेल रेसिंग तुलना विकास गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी उच्च गति tandems कारण दुई सवार वजन को कार्य गर्न, ओरालो देखाउन।
डबल-wheeled बाइक आवश्यक भएमा, प्रयोग गर्न, दुई को एक संयुक्त यात्रा धेरै सजिलो छ मान्छे, बल जो unequal छ। यस मामला मा, प्रत्येक Cyclist नै सबैभन्दा ठूलो सम्भव शक्ति संग pedals घुमाउन संभावना छ। tandem Cyclist बलियो कमजोरहरूलाई मदत सबैभन्दा अक्सर। यो फाइदा tandem रुचि गर्ने cyclists को बहुमत लागि निर्णायक छ।
डबल मा चढेर जब प्रमुख बाइक Cyclist र सह-चालक सजिलै आवश्यक respite दिने प्रत्येक अन्य, interchanged गर्न सकिन्छ। tandem नियन्त्रण, साथै आधारभूत लोड, बैठे अगाडि मान्छ।
हामी tandems कमीकमजोरी कुरा भने, कम maneuverability, ठूलो त्यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ ब्रेक लगान दूरी, जब कुनै न कुनै भू-भाग ड्राइभिङ केही कठिनाइ। एक सवार लागि डबल बाइक मा आन्दोलन किनभने वाहन को प्रभावशाली वजन को पनि गाह्रो हुन सक्छ।
आदेश र नियन्त्रण सुविधाहरू
डबल बाइक अगाडि स्थिति लिन्छ र गियर परिवर्तन, ब्रेक को सक्रियता र दिशा को एक विकल्प लागि जिम्मेवार छ जो पायलट, नियन्त्रण। शक्ति pedaling समयमा सामान्यतया कुल ऊर्जा 50% सम्म छ साथी, पछि स्थित। एक निश्चित गति र विश्वस्त सन्तुलन मा बाइक सार्न आवश्यक प्रयासमा सिर्जना गर्न - साझेदार मुख्य कार्य।
डबल साइकिल अवसर equalize
tandem प्रयोग तिमी चाँडै एक मानिस, शायद एक विश्वस्त Cyclist, एक साइकल चढेर परिचित बारी गर्न अनुमति दिन्छ। एक जोडी मा साइकल चलाउँद गर्दा पूर्ण किनभने बाइक नियन्त्रण सम्पूर्ण अनुभवी Cyclist, अगाडि मा स्थित छ जो सार्ने छ, पतन अघि डर कारक गायब।
Tandem तत्काल फरक शारीरिक क्षमता र नैतिक स्थितिमा द्वारा प्रतिष्ठित छन् जो मानिसहरू equalizes। यो वाहन कमजोर दृष्टि, बच्चाहरु, बृद्ध, घाइते पछि पुनर्वास को आवश्यकता मा व्यक्ति मानिसहरूलाई उपलब्ध छ।
Tandem को विश्वसनीयता र मनोवैज्ञानिक अनुकूलता जाँच गर्न सही उपकरण हो। घोडा डबल बाइक स्वचालित रूपमा अपरिचित संचार वा लजालु व्यक्तित्व गर्न मनोवैज्ञानिक पर्खाल गायब बनाउँछ, सँगै मान्छे ल्याउँछ।
वर्ष वर्ष युगल देखि tandems झन् प्रभावशाली गति हासिल गर्ने क्षमता द्वारा निर्देशित छन् जो cyclists, खरिद छन्। tandem जोडी अवैतनिक cyclists समतल बाटोमा साइकल चलाउँद जस्तै राम्रो व्यावसायिक खेल एक पारित गर्न सक्षम र ढलान नियन्त्रणमा।
एक वाहन मा दुई cyclists उपस्थिति गुणा मांसपेशी प्रयासको ऊर्जा बढ्छ, दुई हृदय शक्ति दिन्छ। जब यो काउन्टर हावा प्रवाह उच्च गति ड्राइभिङ लागि निर्धारण कारक बन्दछ कि विराजमान सवार एक अगाडि लाइ रोक्छ।
वृद्धि मा आन्दोलन को सुविधाहरू
तपाईं लामो, stringy अप हटाउन हुँदा, tandem व्यवस्थापन गर्न एकदम गाह्रो, ढिलो साइकल बन्नेछ। समतल भूमि वा ओरालो मा चढेर जब दुई Cyclist गर्न आर्जित कि सबै लाभ, तत्काल गायब।
जब ढलान यात्रा डबल बाइक downshift गर्न आवश्यक छ। को ढलान अप सार्दा हुन्छ गर्दा विशेष सजिलै देखिने समस्या, जब आवश्यक क्याच cyclists समूह।
को tandem मा ब्रेकिंग यसलाई डबल छ, विशेष गरी यदि यसको कठिनाइ छ tricycle। यो समयमा ब्रेकिंग कि ज्ञात छ साइकल ब्रेक गरम करना सक्छ। ब्रेकिंग ऊर्जा गति र साइकलको वजन सापेक्षित वृद्धि भएको छ। यो बारी मा एक स्केटिङ ब्रेक लगान ऊर्जा संग तुलना बारेमा 8 पटक एक स्तरमा वृद्धि सक्छ साइकल गति मा वृद्धि धेरै पटक छ भन्ने हो।
tandem मा ब्रेक मा लोड कम गर्न अक्सर प्रयोग गरिन्छ विभिन्न ब्रेक लगान प्रणाली अलग प्रकार: स्लिभ, ड्रम, रिम, डिस्क। ब्रेक तीन वा बढी विभिन्न प्रकारका उपस्थिति डबल साइकल लागि मानक समाधान छ।
डबल छोराछोरीको बाइक साना पुस्ता को स्वस्थ विकास को लागि एक उत्कृष्ट उपकरण छ। Tandem जसको शारीरिक क्षमता गठन को चरण मा हो छोराछोरी, लागि राम्रो मनोरञ्जन हुन सक्छ।
एक tandem मा चढेर बच्चाहरु ठाउँ मा नेभिगेट गर्न सिक्न मद्दत गर्छ, बढावा चपलता, समन्वय, को musculoskeletal सिस्टम बलियो बनाउँछ।
अन्त मा, किन जहाँ आमाबाबुले एकै समयमा धेरै बच्चाहरु ड्राइभिङ एक वाहन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ अधिक महंगा बाइक को खरीद, पैसा खर्च? अन्य कुराहरु, यो विकल्प जोडाहरू को जन्म दिन सिद्ध उपहार हुन सक्छ।
लेखको मुख्य बुँदाहरू reiterate गर्न।
यसलाई डबल पाङ्ग्रा भनिन्छ रूपमा? यो मूल, आन्दोलन को सजिलो र अत्यधिक प्रभावकारी माध्यम "tandem" को परिभाषा अन्तर्गत संसारभरि चारैतिर फैलियो छ।
गुणस्तर डबल बाइक निर्धारण विकास टोली अन्तरक्रिया गर्न सकिँदैन। केही विशेषज्ञहरु एक tandem गठन cohesion लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका विश्वास गर्छन्। एक साइकल चढेर डबल कि तपाईं समन्वित आन्दोलन लागि सवार को कार्यहरू समन्वय गर्न अनुमति ससर्त आदेशहरू को सम्पूर्ण प्रणाली विकास गर्दा वर्तमानमा, कार्यहरू cyclists सिंक्रोनाईजमा।
घोडा डबल बाइक नयाँ कुरा संग चकित गाह्रो छ जो जीवन्त छाप, विशेष उत्सुक bicyclists, धेरै ल्याउन सक्छ। त्यसैले चढेर tandem परिवहन दुई-wheeled मोड साथी छ जो कोहीले गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तपाईं के एक हैमम थाहा छ?
कसरी "Maynkraft" आफ्नो कुकुर तालिम, र यो आवश्यक छ कि
Enamel PF-115: विनिर्देशहरू। समीक्षाहरू, खर्चहरू, मूल्य
को थोपाहरूबा बिरालोहरु लागि fleas लागि राम्रो हो?